Tine pano chinetso cheZuva reNyika Zvakatipoteredza | Ndinobva mac
Tine pano chinetso cheZuva reNyika Yezvakatipoteredza
Mavhiki mashoma apfuura takataura - musi waMay 20- nezve iri dambudziko nyowani raizosvika reApple Watch munaJune 5 uye nhasi, zuva pamberi paro, izvi inotowanikwa seinowanikwa pane yedu wachi akangwara. Mune ino kesi, hachisi chinhu chakaomesesa kuita sekunyevera kwatakaita muzuva rayo, Apple haitibvunze zvakawandisa kuti tiwane menduru yekubudirira, zvimiti uye zvimwe zvatingazoshandisa mumashure meseji.
Aya matambudziko anotibatsira kufamba
Ivo chavanoda kuzadzikisa neaya Matambudziko eEkuita kutikurudzira kuti tiite zverimwe rudzi, kungave kumhanya, kufamba kana zvakafanana. Pane ino chiitiko, kuti titore menduru uye tikunde dambudziko, isu tichafanirwa kuvhara iyo "Yakamira" mhete yewachi yedu, chimwe chinhu chiri nyore asi ichokwadi dzimwe nguva isu hatikwanise kuzadzisa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Inofanira kutaurwa kuti iri pamusoro pekuve miniti imwe yakamira kwemaawa gumi nemaviri.
KuApple, zvinetswa zveChiitiko zvakamisa iyi mwedzi yakaoma umo chirwere checoronavirus chairova nyika - tarasikirwa nedanho reZuva rePasi rakaitika muna Chivabvu - uye mune izvi hazvina kana basa kusiya imba kuti uzviite. Ivo vakatozviona izvo. Muchidimbu, zvakakosha kufamba uye kuyedza kuve nehupenyu hwakagwinya sezvinobvira kudaro nemhando iyi ye "mubayiro zvinokurudzira" tinogona kutarisira muviri wedu zvishoma uye kunakidzwa noutano huri nani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Tine pano chinetso cheZuva reNyika Yezvakatipoteredza
Tsika dzeUS dzinotora kuendesa kwemanyepo AirPods
James DeLorenzo angadai akasaina Apple